Birta aan fiicnayn ee Johnson birta aan fiicnayn ee v-wire shaashadda ceelka
Waxay ku habboon tahay samaynta sonkorta, macdanta dhuxusha, farsamaynta macdanta, sibidhka, warshadaha iyo daaweynta bulaacada magaalooyinka.
Filterka hore ee loo isticmaalo warshadaha qashinka ee degmada iyo warshadaha ayaa wanaajin kara waxqabadka caddaynta isagoo si weyn u yareynaya culeyska.
Loo isticmaalo ka saarista fiber-ka ee warshadaha istaarijka.
Faa'iidooyinka Johnson ahamaama v-fire soo saaraha tuubada ceelka fiican
1. Dhuumaha shaashadda oo leh meel ballaadhan oo furan ayaa ku habboon dhismaha ceelasha biyaha, ceelasha saliidda iyo gaaska.
2. Shaashadda oo leh kharash yar oo hawlgal ah iyo dhul weyn oo macdanta laga qodo ayaa ku habboon gelitaanka biyaha dhulka hoostiisa. Khayraadka biyuhu waxay hoos u dhigi karaan heerka biyaha waxayna badbaadin karaan isticmaalka tamarta.
3. Isla shuruudo la mid ah, aagga sare ee furan wuxuu ka dhigi karaa xawaaraha biyaha dhulka hoostiisa ee gelaya tuubada shaashadda oo aad uga hooseeya qalabka kale ee shaandhaynta, isaga oo ka fogaanaya ciidda cadaadiska sare leh ee galaya tuubada shaashadda, sidaas darteed hoos u dhigista bamka.
4. Taas beddelkeeda, aad bay u sahlan tahay in biyaha dhulka hoostiisa ahi ay galaan shaashadda oo leh meel bannaan oo ka weyn kan bannaan oo yar. Qulqulka biyuhu wuxuu dheerayn karaa nolosha adeegga ceelka.
Astaamaha Johnson ahama birta v-silig screen ceel
1. Waxay ka kooban yihiin ul silig V-qaabeeya ama weji-qaabeeya iyo usha taageerada dhererka.
2. Taangiga joogtada ahi waxa uu leeyahay aag weyn oo furan, taas oo yarayn karta xawaaraha gelitaanka biyaha, kana ilaalin karta ciidda in ay soo gasho shaashadda cadaadis weyn, si ay si fiican u shaandhayso ciidda.
3. Isgoys kasta oo ka mid ah kirishbooyadani waa mid isku xiran, sidaas darteed waxay leedahay qaab dhismeed adag iyo sifooyin farsamo oo wanaagsan.
Cadaynta muraayada ceelka ee v-wire birta ah ee Johnson
Tilmaanta (silig goglan): Ballaca (mm): 1.50 1.80 2.30 3.00 3.30 3.70 Dhererka (mm): 2.20 2.50 2.70 3.60 4.30 4.70 5.60 6.30 7.00
Tilmaamaha (Usha taageerada): Ballaca (mm): 2.30 3.00 3.30 3.70 Dhererka (mm): 2.70 3.60 4.70 5.60 6.30 Wareega: Laga bilaabo 2.50mm ilaa 6.0mm
Xusuusin: tilmaamo kale oo la heli karo sida codsigu yahay
size Slot 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30…… 6.00mm sidoo kale lagu gaarey codsi.
Qalab: kartoonka hoose ee galvanized (LCG), birta aan la taaban karin (304,316 iwm.)
Dhererka ilaa 6 mitir.
Dhexroorka 25mm ilaa 1200mm.
Jooji xidhiidhka Cidhifyo bacaad ah oo googo'an, isku xidhidyo fidsan ama dun leh
Hore: Shaandheeyaha dhuumaha gaaska dabiiciga ah - filtarrada konical
Xiga: shaandhada birta ah ee birta ah ee galvanized ee daloolsan